၁၀.၄.၂၀၁၉ – TKBC Bible
2 ငါတို့သည် ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို ထိုသူတို့ကဲ့သို့ ကြားရကြပြီ။ သို့ရာတွင် သူတို့ကြားရသော တရားစကားသည်၊ ကြားရသောသူတို့အထဲ၌ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မရောနှောသောကြောင့် အကျိုးကိုမပေး။-3ငါတို့မူကား၊ ယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ ချမ်းသာထဲသို့ ဝင်ကြရ၏။ ထိုသို့နှင့်အညီ ဗျာဒိတ်တော်ကား၊ သူတို့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့ မဝင်ရကြဟု အမျက်ထွက်၍ ငါကျိန်ဆိုသည်ဟု လာ၏။ ချမ်းသာဟုဆိုသော်၊ ကမ္ဘာဦးကပင် အမှုအရာတို့ကို ပြီးစီး၍ ငြိမ်ဝပ်တော်မူရာ ချမ်းသာဟု ဆိုလိုသတည်း။-Ref4ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့ကို အကြောင်းပြု၍ ကျမ်းစာတစ်ချက်၌ လာသည်ကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိအမှုအရာအလုံး စုံတို့ကို ပြီးစီး၍ ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေတော်မူ၏ဟု လာသတည်း။-Ref5ထိုကျမ်းစာ၌ တစ်ဖန် လာသည်ကား၊ သူတို့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့ မဝင်ရကြဟုလာသတည်း။-6ထိုကြောင့်၊ အချို့တို့သည် ဝင်ရကြ၏။ ဝမ်းမြောက်စရာ သတင်းကို ရှေ့ဦးစွာ ကြားရသော သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် မဝင်ရကြပြီ။
7 တစ်ဖန်တုံ၊ ယနေ့တွင် သင်တို့သည် ဗျာဒိတ်တော်အသံကို ကြားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ ခိုင်မာသော စိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်ဟု ဆိုသည်ဖြစ်၍၊ ဤမျှလောက် ကာလကြာပြီးမှ၊ ယနေ့ဟု ဒါဝိဒ်ကျမ်းစာ၌ လာသောအခါ၊ တစ်စုံတစ်ခုသော နေ့ရက်ကို သေချာစွာမှတ်သားသတည်း။- 8 ယောရှုသည် ထိုသူတို့ကို ချမ်းသာပေးသည် မှန်လျှင်၊ ထိုနောက် အခြားသောနေ့ရက်ကို အဘယ်ဆိုဖွယ်ရှိသနည်း။-9ထိုကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏လူတို့အဖို့ အလိုငှာ ငြိမ်ဝပ်ခြင်း ချမ်းသာတစ်မျိုးသည် ကျန်ရစ်သေး၏။- 10 ဘုရားသခင်သည် မိမိအမှုအရာတို့ကို ပြီးစီး၍ ငြိမ်ဝပ်စွာ နေတော်မူသည်နည်းတူ၊ ထိုချမ်းသာထဲသို့ ဝင်ရသောသူသည်လည်း မိမိအမှုအရာတို့ကို ပြီးစီး၍ ငြိမ်ဝပ်စွာနေရ၏။
11 ထိုကြောင့်၊ ဣသရေလလူတို့သည် မယုံကြည်သော စိတ်ရှိသဖြင့် လဲသကဲ့သို့ ငါတို့သည်မလဲ၊ ထိုချမ်းသာထဲသို့ ဝင်ရမည်အကြောင်း ကြိုးစားအားထုတ်ကြကုန်အံ့။- 12 ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည် အသက်ရှင်ခြင်း၊ တန်ခိုးနှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ သန်လျက်တကာတို့ထက် ထက်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍၊ အသက်နှင့် စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းကောင်း၊ အရိုးဆစ်နှင့် ခြင်ဆီကိုလည်းကောင်း ပိုင်းခြား၍ ထုတ်ချင်းခွင်းတတ်၏။ စိတ်နှလုံးအကြံအစည်များကိုလည်း သိမြင်တတ်၏။- 13 ငါတို့ကို စစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသူရှေ့၌ မထင်ရှားသော အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အကွယ်အကာ မရှိဘဲ၊ မျက်မှောက်တော်၌ လှန်ထားလျက် ရှိကြ၏။
14 ယခုမူကား၊ ကောင်းကင်ဘုံထဲသို့ ကြွဝင်တော်မူသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအကြီးတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုသည် ငါတို့၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ဖြစ်တော်မူသောကြောင့်၊ ငါတို့သည် ဝန်ခံခဲ့ပြီးသောအရာ၌ တည်ကြည်ကြကုန်အံ့၊- 15 ငါတို့ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် ငါတို့ခံရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့် မကြင်နာနိုင်သောသူမဟုတ်။ ငါတို့ခံရသည်နည်းတူ၊ အမျိုးမျိုးသော စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းတို့ကို ခံဖူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ သို့ရာတွင်၊ ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့် ကင်းလွတ်တော်မူ၏။- 16 ထိုကြောင့်၊ ငါတို့သည် သနားခြင်း ကရုဏာကိုလည်းကောင်း၊ တော်လျော်သောမစခြင်း ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းကောင်း ခံရမည်အကြောင်း၊ ရဲရင့်သောစိတ်နှင့် ကျေးဇူးပလ္လင်တော်သို့ တိုးဝင် ချည်းကပ်ကြကုန်အံ့။
2 အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤပဝဲဒၣ်အံၤစ့ၢ် ကီးလၢတၢ်သးခုအကစီၣ်, ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိးလီၤ.မ့မ့ၢ် တၢ်ကတိၤလၢအနၢ်ဟူန့ၣ်, တမၤဘျုးဘၣ်အီၤဘၣ်.အ ဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တဃါဃုာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢပှၤလၢအနၢ်ဟူ န့ၣ်ဘၣ်.3အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ပှၤလၢအနာ်တၢ်ပဝဲဒၣ်အံၤ,ပနုာ် ဘၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဘှံးအပူၤ, ဒ်အစံးဝဲအသိး,ဒ်ယဆိၣ် လီၤယသးလၢယသးဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်, လၢအဝဲသ့ၣ်တနုာ် လၢယတၢ်အိၣ်ဘှံးအပူၤဘၣ်.Ref. မ့ၢ်နာ်သက့ ဒ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်မၤတဖၣ်ဝံၤထီၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်အခီၣ်ထံး န့ၣ်လီၤ.4အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,စံးဝဲဒၣ်လၢတၢ်တပူၤလၢနွံနံၤတ နံၤအဂ့ၢ်အကျိၤဒ်အံၤ, ဒီးယွၤအိၣ်ဘှံးလၢအတၢ်မၤခဲ လၢာ်လၢနွံနံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ.Ref.5ဒီးအအံၤတ ပူၤကဒီး, အဝဲသ့ၣ်တနုာ်ဘၣ်လၢယတၢ်အိၣ်ဘှံးအပူၤ ဘၣ်.
6 မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်လီၤတဲာ်ဝဲလၢပှၤကလဲၤနုာ်ဝဲ တနီၤနီၤ, ဒီးပှၤလၢတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢတၢ်သးခု အကစီၣ်အဆိတဖၣ်န့ၣ်,တနုာ်ဘၣ်လၢအတစူၢ်တနာ် ဘၣ်တၢ်အဃိသတးဒီး,7သ့ၣ်နံၤဖးသီကဒီး,ဒီးစံးလၢ စီၤဒၤဝံးအပူၤ, မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ,လၢအကတီၢ်ယံာ်ထဲ န့ၣ်အလီၢ်ခံ,ဒ်တၢ်စံးဝဲအသိးန့ၣ်, မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ,သုမ့ၢ်နၢ်ဟူအကလုၢ်ဒီး,မၤကိၤသုသးတဂ့ၤ. စံး.Ref.
8 အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,စီၤယိၤရှူမ့ၢ်ဒုးအိၣ်ဘှံးတ့ၢ်အီၤဒီး,အဝဲန့ၣ် အလီၢ်ခံတကတိၤလၢၤဘၣ်လၢ နံၤအဂၤအဂ့ၢ်အကျိၤ ဘၣ်.
9 မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်လီၤတဲာ်မးလၢယွၤ အပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ်လီၤ. 10 အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ပှၤလၢအနုာ်ဘၣ်တ့ၢ် ဝဲလၢအတၢ်အိၣ်ဘှံးအပူၤတဂၤန့ၣ်,အဝဲဒၣ်အိၣ်ဘှံးစ့ၢ် ကီးလၢအတၢ်မၤ, ဒ်ယွၤလၢအတၢ်မၤဒၣ်ဝဲအသိး,န့ၣ် လီၤ. 11 မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးမ်ပဂုာ်နုာ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံးတမံၤ အံၤ, ဒ်သိးပသုတလီၤဃံၤထွဲတၢ်တစူၢ်တနာ်ဘၣ်အဒိ အတဲာ်တမံၤဃီအခံ,နီတဂၤတဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်.
12 အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအကလုၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မူ,ဒီးမၤတၢ်သ့, ဒီးအကနၣ်အ့ၣ်တၢ်ဂ့ၤန့ၢ်နးတဘ့ၣ်လၢ အကနၣ်ခံခီ လိာ်, ဒီးဆဲးဖျိတုၤအနီၤဖးပတၢ်မူဒီးပသး,ဒီးတၢ်အဆၢ ဒီးတၢ်အကံၢ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်လၢအသ့ၣ်ညါပသးအတၢ်ဆိ ကမိၣ်ဒီးအတၢ်ကူၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 13 ဒီးတၢ်လၢအ ဘၣ်တ့အသး, တအိၣ်တဒၢဘၣ်လၢအမဲာ်ညါနီတမံၤ ဘၣ်.မ့ၢ်ကယဲၢ်တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်အိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့,ဒီးအိၣ်ဖျါ ထီၣ်ဝဲလၢပှၤအကလုၢ်ဘၣ်ဃးဒီးပှၤန့ၣ်အမဲာ်လီၤ. 14 မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, မ့ၢ်ပအိၣ်ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်ဖးဒိၣ်လၢအလဲၤနုာ်ဆူမူခိၣ်, ယွၤအဖိခွါယ့ၣ်ရှူးတဂၤသတးဒီး,မ်ပဟံးဃာ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤသပှၢ်တၢၢ်တက့ၢ်.-
15 အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပအိၣ်ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ်လၢအသးကညီၤ ပဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်,မ့ၢ်အဘၣ်တၢ် လ့ပစီကိးအမံၤဒဲးဒ်ပဝဲအသိးန့ၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, အတၢ်ဒဲး ဘးတအိၣ်ဘၣ်. 16 မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ဒ်သိးပကဒိးန့ၢ်တၢ် သးကညီၤ, ဒီးထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဖဲတၢ်မၤစၢၤအ ဆၢအကတီၢ်အပူၤဒီးမ်ပသုးဘူးပသးအိၣ်ဒီးပသးခူတ လ့ၢ်ဆူတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အလီၢ်ပစိာ်န့ၣ်တက့ၢ်.